Muraayadaha barafka ama muraayadda barafka Halkee ayaan ka bilaabayaa? - ULLER
Haddii aad weli ka fekereyso, xilligan oo kale, oo ku saabsan bilaabista cayaaraha xilliga qaboobaha, marna kama daahin inaad dib u eegto waxa aad doorbideyso markii aad dooraneyso halka laga bilaabayo, dooro nooca ku habboon ee adiga kugu habboon ka dibna fahmi kara haddii aad marka hore iibsaneyso adiga Muraayadaha indhaha ama kanaga muraayadaha barafka.
Waxa ugu horreeya ee ay tahay inaad ogaato, oo hubaal waad si fiican u ogaan doontaa, waa in labaduba ay yihiin farsamooyin isboorti barafka, laakiin inay gebi ahaanba ka duwan yihiin, sida qalabka iyo qalabka aad u baahan tahay inaad ku tababarto. Si qaas ah, maqaalkan waxaan dooneynaa inaan ku muujino kala duwanaansho muhiim ah oo u dhexeeya barafka caadiga ah iyo barafka. barafka. Tan, waxaad si hubaal ah u heli doontaa si cad markaad dooraneyso labadan.
Waxa ugu muhiimsan ayaa ah in, waana hubaal inaad horeyba u ogayd, barafka waxaad ku qalabaysan tahay loox cag kasta oo baraf ahna waxaad ku qabanaysaa hal loox. Labada qaabba jirka ayaa loogu jimicsadaa si isku mid ah, inkasta oo ficil ahaan dhaqdhaqaaqyada, farsamooyinka iyo faa'iidooyinka laga soo helay ay xoogaa ka duwan yihiin.
Akhriso oo wax yar ka ogow waxa mid kasta oo ka mid ah edbinta isboortiga barafka ay u egyihiin ka dibna doorto kan ugu fiican Muraayadaha indhahaama kanaga muraayadaha barafka!
Barafku waa sidee?
El baraf waa, asal ahaan, isboorti buur oo ku lug leh geedi socod barasho oo in badan ku tiirsan tayada jireed iyo maskaxeed ee skier-ka. Kuwa bilowga ah waxaa lagugula talinayaa inaad kubilaabtaan meelaha dhaadheer adoo qunyar socod ah, kuna haboon iyaga.
Waqti ka dib, shaqsigu wuxuu kasbadaa kalsooni wuxuuna ku dhiiradaa xagal foorasho oo weyn, taas oo ay kula kulmi karaan dariiqyo xawaare dheereeya oo u oggolaanaya inay ku tababaraan awooddooda xakamaynta. Baaskiilku, badiyaa, wuxuu tababaro jirka hoose ee jirkiisa iyo, in yar, dhinacyada kore. Skilaydu waa inuu had iyo jeer qaataa dhammaan qalabka lagama maarmaanka u ah ficilka, oo ay ku jiraan wanaagga Muraayadaha indhaha.
Ujeeddadu waa in la helo dhaqanka, xirfadda, kalsoonida iyo xakamaynta ku filan si looga guuleysto sinaan la’aan ama lama filaan kasta oo jidkaaga ku soo foodsaarta, had iyo jeer iyada oo diiradda la saarayo deegaanka, khataraha ay leeyihiin dhammaan caqabadaha ka jira buurta. . Dareenkan, barafku wuxuu leeyahay qayb u gaar ah tacaburka oo laga yaabo inuu yahay barafka ma laha ama taasi, si kasta oo ay tahay, waxaa loogu dhaqmaa si kale.
Barafka waa sidee
Baraf barafku wuxuu ku saabsan yahay xitaa ka sii shaqeynta, ku dhawaad ​​gaar ahaaneed, jirka hoose ee qofka. Waxay u baahan tahay isku-dheellitirnaan iyo isku-dubbaridid ​​dhaqdhaqaaqyo ka badan baraf-barafka, gaar ahaan inta lagu gudajiro geeddi-socodka barashada, maadaama miisaanka oo dhan uu ku dhacayo dusha yar (guddiga) oo ma jiraan ulaha taageerada. Taas macnaheedu waa in marka hore aad waqti badan ku qaadaneyso dhulka.
Si kastaba xaalku ha ahaadee, leh barasho ku filan, barafku wuu ka fududyahay barafka iyadoo la macno yahay inaad kaliya hal guddi leedahay iyo farsamada oo dhan dusheeda, dhaqdhaqaaqyadu maaha kuwo casriyeysan sida xaalada barafka. Ku guuleysiga xirfadaha sare ee barafka ayaa ka fudud kana dhakhso badan barafka.
Xaqiiqdii tan kadib waxaad isweydiin doontaa ...Iyo sidee freeride?
Habka 'freeride' wuxuu ka kooban yahay macno ahaan inuu ka tago meelaha barafka laga riixo si loo helo aagag baraf ah oo bikrad ah oo aad ku noolaan karto khibrad xad dhaaf ah, duurjoog ah oo dhab ah. Qaabkan soojiidashada leh, ee ay ku sii kordhayeen xiisaha ay u hayaan dadka barafka wata sannadihii la soo dhaafay, ayaa qeyb ka mid ah dadweynahan ka fogeeyay meelaha lagu caweeyo tan iyo markii ay rumeysnaayeen in nolol u raadinta naftooda ay ka wanaagsan tahay in la helo meelo wanaagsan oo lagu anshax mariyo edbintan . Idaacadaha qaar ayaa kajawaabay dalabkan, sida Vallnord ama Grandvalira, Soosaarista goobo loogu talagalay xoreeyayaasha laakiin sidoo kale leh aalado u gaar ah iyo iskuulo ay ku baran karaan ku guurista dhul bikro ah.
Waxaan la wadaageynaa fiidiyowgaan aadka u qabow si aan shaki ugu jirin waxa safarka bilaashka ah uu nadiif yahay oo fudud yahay.
Haddii ay dhacdo inaad isweydiiso ... Arcalís, xarunta Vallnord, hadda waa mid ka mid ah tixraacyada ugu muhiimsan ee baraf freeride Sababtoo ah xaaladdeeda waxay ku habboon tahay ilaalinta dabiiciga ah ee ka soo horjeedda dabaysha, in ka badan 130 dalxiis oo suurtagal ah iyo sababta oo ah meeshu waxay u dabaaldegaysaa 20 sano oo ku bixinaysa tacabur hoosta qaabkan. Waa in la ogaadaa in sanad kasta, Vallnord, FWT ama Safarka Adduunka ee Freeride.
Grandvalira, dhinaceeda, waa la cusbooneysiiyay si loo siiyo barafka 'freeride' barafka tayada leh martideeda. Waxay abuureen tartanka Grandride waxayna galeen wareegga tijaabada barafka ee caalamiga ah. Waxay sidoo kale soo saareen Xarunta Freeride, oo ah qayb cusub oo ka mid ah dugsigooda, kuna takhasusay farta-ka-goynta piste-ka oo bixiya fasalo shaqsi iyo kooxba. Waxaad sidoo kale ku raaxeysan kartaa Grandvalira xirmada Ski Safari, dibedda la socda kormeerayaal xirfadlayaal ah oo kugula socda socdaallada ugu fiican.
Xaqiiqdii, Wadarta Guud ee Masters of Freestyle waa mid ka mid ah tartamada ugu waaweyn ee magaaladan, kaas oo isu keenaya barafka ugu fiican iyo wadayaasha freeski xilligan ee loo dalxiis tago ee Andorran. Grandvalira.
El Tarter Snowpark wuxuu isu badalay goob dagaal oo ay ka buuxaan boodbooyin qurux badan iyo baashaal. Dhacdadani waxay leedahay 5-xiddig oo lagu kala soocayo Safarka Barafka Adduunka iyo qaybta dahabka ee wareegga AFP (wareegga xirfadda xorriyadda leh), noqoshada mid ka mid ah ballamaha tixraaca ee kalandarka adduunka ee ku saabsan anshax marinta.
Tartanka barafka lagu ciyaaro ee qaabka slopestyle, waa tan ugu muhiimsan koonfurta Yurub iyadoo la kaashanayo wadayaasha heerka ugu sareeya. Dhacdadu waxay dayactirtay booqashada shan-xiddigood ee Barafka Dunida (ugu badnaan lix xiddigood oo suurtagal ah), oo la siiyo.
Hadaad xiisaynaysid barafka, baraf ama xorriyaddaWaa kuwan dhowr goobood oo wanaagsan oo aad ku dhex geli karto qaabkan. Hadana haddii aad ku dhaqantay meel kale oo aad ka heshay, ha ka waaban inaad nala wadaagto! Dhamaadka maalinta dhib malahan meesha aad ka bilawdid, muhiimadu waa inaad nagu aragto ficil ahaan!